Mofomamy akondro - fomba fahandro mora sy matsiro miaraka amin'ny Thermomix | ThermoRecipes
tsindrin-tsakafo190 minitraOlona 8-10350 kaloria
Mofomamy vita amin'ny fitiavana rehetra ary misy tsiro mahavariana. Ho gaga ianao amin'ny tsirony fromazy matsiro miaraka amin'ny akondro ary ampiarahina amin'ny cookies oreo mba hahatonga azy io ho tonga lafatra. Izy io dia tsindrin-tsakafo tena tsotra atao ary amin'ny Thermomix anay dia hanamora ny asanao izany.
Ity mofomamy ity dia tsy misy dingana maro. Tsy maintsy manamboatra fotony vita amin'ny cookies oreo ianao ary famenoana malefaka vita amin'ny fromazy fanosotra ary mash vita amin'ny akondro. Ny sisa tavela dia ny fametahana ny mofomamy voaendy sy ny fanaovana azy ho malefaka be nefa tsy triatra, tsy maintsy ataontsika ilay teknikan'ny bain-marie.
Amin'ity teknika ity dia tsy maintsy apetratsika ao anaty lasitra hafa ny bobongolo lehibe kokoa sy feno rano. Amin'izany fomba izany, ny fiantraikan'ny hafanana ao anaty lafaoro dia tsy ho be loatra ary ny mofomamy dia handrahaka milamina sy malefaka kokoa.
1 Mofo akondro
Mofomamy matsiro vita amin'ny akondro. Tena tsara ny tsirony satria voahandro ary vita amin'ny fromazy. Ny tsirony dia hofenoina miaraka amina cookies manokana miaraka amin'ny cookies oreo.
Fotoana fiomanana: 1h 40M
Fotoana hiketrehana: 1h 30M
Fotoana manontolo: 3h 10M
Cookie oreo 170g
Dibera 125g, atsonika
Ho an'ny mofomamy
600g karazana fromazy fanosotra ao Philadelphia
Lafarinina varimbazaha na katsaka 3 sotro fihinanana
Akondro masaka 3
iray sotro ny fitrandrahana lavanila
Ho an'ny haingon-trano
Izahay no manao ny fototry ny mofomamy. Ao amin'ny veranay Thermomix dia ampio ny cookies 170g oreo ary hotorotoroinay izy ireo. Izahay dia manao fandaharana 20 segondra amin'ny hafainganam-pandeha 6. Manaraka izany dia ampianay ny 125g dibera efa niempo sy programa hafa 20 segondra amin'ny hafainganam-pandeha 6. Raha mbola tsy vita tsara ilay fangaro dia ampio hampihena ny akora miaraka amin'ny spatula ary handahatra fandaharana hafa 10 segondra amin'ny hafainganam-pandeha 6.
Manamboatra lasitra boribory izahay ho an'ny mofomamy tokony ho 20cm ny savaivony. Apetrantsika amin'ny taratasy fanaova ny fotony, satria hapetratsika eo amboniny ireo akora ao aminy ary ahafahantsika mamoaka tsara kokoa ny mofomamy. Apetrakay eo amboniny ny fototry ny mofomamy ary manitatra azy manerana ny fotony. Namandrika izahay.
Manafana ny lafaoro hatramin'ny 150 ° izahay. Manomana ny fangaro mofomamy izahay. Ao amin'ny vera Thermomix madio no ampiantsika ny akondro 3, mizara roa. Hanorotoro azy ireo isika, noho io fandaharana ataontsika io 30 segondra amin'ny hafainganam-pandeha 5. Manaraka izany dia ampianay ny siramamy 200g, ny atody telo nokapohina ary ny sotro fihinana lavanila. Namerina nanamboatra indray izahay 30 segondra amin'ny hafainganam-pandeha 4.
Manohy manampy ny kesika sy programa fanosotra 600g izahay 30 segondra amin'ny hafainganam-pandeha 4. Ary farany dia ampianay ny lafarinina telo tablespoons sy programa hafa 30 segondra amin'ny hafainganam-pandeha 4. Hamarininay fa vita tsara ilay fangaro, mila milamina izy ary tsy misy vongan, raha tsy izany dia miverena mandram-potoana kely kokoa.
Napetrakay tao anaty lapoely izay nohazoninay niaraka tamin'ny fototry ny mofomamy ilay fangaro. Hanendy izany ao anaty bain-marie isika, noho izany dia hapetraka ao anaty loharano feno rano isika ary hataontsika ao anaty lafaoro handrahoana mandritra ny adiny 1 sy 30 eo ho eo. Ny fahafantarana fa vita dia hametraka zavatra maranitra isika ary raha hitantsika fa mivoaka madio dia hatao sy vita. Raha tsy izany no izy dia avelantsika ao anaty lafaoro mandritra ny 15 minitra hafa.
Ao amin'ny veranay Thermomix madio dia hikapoka ny crème isika. Mba hametrahana tsara ilay crème dia matetika apetrako ao anaty vata fampangatsiahana mandritra ny 15 minitra ny vera mba hangatsiaka. Avy eo apetrako ny vera ary arotsako mangatsiaka be ilay crème, apetrako ny lolo ary programako mandritra izany 1 minitra amin'ny hafainganana 3,5. Mazava ho azy fa matetika aho nokaravasina tamin'ireto masontsivana ireto, fa ny fotoana dia manondro, tsy maintsy jerenao hoe mandra-pahoviana no mila famoahana ny crème. Amin'ny farany dia asiko ny siramamy sy ny lavanila ary afangaro amin'ny tanako.
Miaraka amin'ny mofomamy mangatsiaka dia hanaingoantsika azy. Apetrakay ao anaty kitapo mofomamy misy tsiranoka miolakolaka be ny crème ary mandavaka ny sisin'ny mofomamy. Apetrakay eo ambonin'ny crème ny cookies. Notapahinay ny akondro iray ary napetrakay teo afovoan'ny mofomamy. Homaninay izany.
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Mihoatra ny 1 ora sy 1/2, Postres
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » Ho an'ny fotoana » Mihoatra ny 1 ora sy 1/2 » Mofo akondro
Muffins misy voanjo cashew sy hanitra voasary